Yintoni umahluko, ukuba ufuna ukuthumela oku, ukuze kubekho inkqubela nge-SMS, apho izandi mna-conscious, kwaye yintoni kanye kanye zenza umahluko, ukuba kubekho inkqubela ifunda oku. Ngoko ke mna, njengokuba kubekho inkqubela, ingaba ukulifumana ngcono ukuba uya kuba makhaya: kufuneka enze mhlawumbi Lust kunye nam.) Ndicinga ukuba kungcono. Ezinye ndicinga ukuba akukho nto yenza umahluko. Nangona kunjalo, ukuba kuphela yakho izivakalisi ukukhetha ukususela, ndinga kodwa sifuna ukuya kuhlangana kwethu. bhetele. I ndingathanda incwadi i-cambalala umyinge Fonic Ebukekayo S. Unako mna ukunxulumana kuphela nge-Bank okanye nge-SMS. Ukuba usebenzisa i-SMS, yintoni ebeya ndine ukubhala ke. indlela yokufunda kwi-isihloko, mna khangela i-App for Android i-yokubhala luvumela a phambi-ngu-SMS ukuba phambi-ngokomgaqo-qhagamshelana ne-nje omnye cofa. Mna manipulated ngayo kum ngoko ke mna ke phezu kwe-Desktop njenge Uhlobo ikhonkco, kwaye ukusukela oko liyimfuneko kuphela xa kuyimfuneko ukuba cinezela nakwi-uyaya yi-ngokwayo. Wokungasemva ngu zilandelayo: mna weza kuwo umhlobo kuyo. Umfazi ngu pregnant kwaye ukuba kunjalo, kufuneka ubhala kunye enye kuphela nqakraza kwi umntu yokubhaliweyo. I-iselula evaluates i-SMS usebenzisa i Alarm ibhokisi (Usetyenziso SMS alerting emlilweni brigade) kwaye umntu unako react ngokukhawuleza. Kodwa kanjalo ezininzi kwezinye iindawo, umzekelo, abantu abasweleyo ka-care. Heee) ngaba nabani na uyazi kanye umahluko phakathi Suras kwaye yeyona eba neasidi izisombululo. ngoko ke, yintoni ndifumanise ukuba, ngaphandle kukuba yeyona eba neasidi izisombululo ingaba ngokulula diluted ngamanzi Suras – ukuba ichanekile. kodwa yintoni ndimangazekile ngoko ke, indlela enjalo sour isisombululo ikhangeleka kanye kanye (njengoko umthetho) kwaye impendulo ukuziphatha ngu efanayo. Ndiyathemba umntu unako kundinceda enkosi uncedo kwangaphambili, kwaye kwangoko nto ngakumbi iza kuthi. ingaba ufuna uncedo kum. yintoni ingaba ufuna bhala okanye indlela ubhala. Enkosi, Fabia, kwaye bendiphantsi omnye umhla kwi-Instagram loga, kodwa ndiza hardly ngoko ke, ngenxa yokuba mna sebenzisa zange (kuyanqaphazekaarely) kwaye soloko ne-PC-intanethi kusasa. Ngoko ndafumanisa umhlobo wam kwaye’ landela’. Mna nqakraza kuyo kwaye ke zibophelele. Subscribing kuyo, ndiyaqonda nge jmd. ngoko ke, ukuthetha,’ umhlobo’, ngoko uyakwazi ukubona iindaba ezintsha abo kwaye iimboniselo, ngolohlobo. Ndaya sizame kwaye ndiqinisekile kwi zibophelele kwaye ke re-kulandela. Wam umbuzo ngoku: Yintoni umahluko phakathi Zibophelele kwaye landela kwi-Instagram. (Kude kube ngoku mna kuphela nikela kwaye landela of FB kwaye Itwitter) ndiza ngothando kunye kubekho inkqubela kwaye ukuyibhala, kuye nge-sms ukuba wena kuba nam waba ebalulekileyo kwaye ndiyakuthanda! Xa wabuyela, ndifuna ukucela intlanganiso. Kwaye kufuneka ndibhala kakuhle ukuba kum ibalulekile kwaye ukuba mna uthando kuwe, okanye ndimele wabhala into ethile. Unako (n) kubekho inkqubela, nawe ngomhla ngu I-valentine ngu mhla sms ukuthumela ‘ndonwabe i-valentine ngu mhla’ okanye njalo. Ungalufumana njani phezu kwaso. Okanye kufuneka sibe Bhala into ethile. Ndifuna ukwenza phezulu kunye Umlingane wam.
ngenxa andinaku kuhlangana kuthi ngexesha. kwaye babefuna ukuba uyakwazi buza ukuba uyakwazi uncedo kum. kwaye ndingathi oko ayikwazanga ukubhala kwi-sms. Andinalo real sicwangciso. Mna izolo zahlangana a aph kubekho inkqubela kwi-Disco kwaye ungathanda ukuba uqhagamshelane kuwe nge-SMS ngenjongo Ntlanganiso.
Oko kumele ndibhala
Ubhala isandla-ebhalwe ngoonobumba okanye ishicilelwe, okanye namhlanje nje nge-imeyili, yi-ifowuni kwaye nge-SMS. Xa (ukuba ingaba yintoni na ithuba) ubhala ileta Ngesandla. Ngoko ke, sibhala Baptists ingaba fed, baya kuba abantwana nosapho unako akukho lwethelevijini, akufunekanga umsi kwaye kuba car kuwe kuphela drive kwi umsebenzi. Ndifuna ukuqonda hayi-ke-ngenene, akukho ndawo kuyo Ibhayibhile ithi ukuba uvunyelwe ukuba kuba akukho gunya. Kwaye kutheni bonke abafazi Racke. Kwaye mna anayithathela weva ukuba xa kubekho inkqubela ubani boyfriend awuvumelekanga ukubamba dog, ukuba boy ngu tolerated yi-usapho, abe, ukuba ukho invited ukuba badle, hayi ukuba nihlale elandelayo, kuye kwaye uza kuhlangana kuphela xa umhlobo ka-hers kwaye umhlobo kuye iza nge-njalo.
Unako kum enye chaza ukuba yintoni Ngasemva Yonke. Oh, Ngesondo ngaphambi kokutshata alikho ilungelo, kufuneka kuba wayecinga ka-mhlawumbi wonke. Ndibhala nge kubekho inkqubela ku WhatsApp kwaye sifuna ukuya kuhlangana kamsinya. Kwaye ndifuna ukwazi njani ilizwi lakho izandi, kwaye ucinga ngayo iingcaphephe iza ngapha funny xa mna wathetha kubo umyalezo ka umbuzo. Mna wathumela kuye kanjalo ngubani, ithemba kuthunyelwa kubo kum kanjalo. Kodwa ke sele hayi ndifuna made nam ndonwabe kunye umfana kuhlangana, ndiyazi kancinane malunga nezinye izihlobo, kwaye babefuna ukuba ucele kuye SMS emva Intlanganiso. Ndingathanda wam xrayswarm kuthi mna ndiyamthanda, kodwa asingawo nako ukuhlangabezana kwethu, kodwa nje ukubhala. ukuba Lowo ithumela kum a Smiley nge-sms, oko kubonisa kuphela umbuzo marks, kodwa akukho Smileys ukuze abe ithumela. Phambi ukuba, ndabhala abayo kwi Badoo. I-SMS unxibelelwano waye kanjalo. I-real intlanganiso kokuba kuthathelwe indawo kwi-wonke indawo kunye umhlobo le kubekho inkqubela kwaye isikolo umhlobo kunye nam. Babefuna ukuba kuba pants ukusuka kum. Umhlobo wayo ukuba kokuba wabuza kwam imibuzo kwaye kubekho inkqubela othe hayi kuthethwa phezulu ngemiba kwaphela kunye nam. Kakhulu ngokukhawuleza, waya ngaphandle kwam ukuya ngasese. Kwaye ngoko weza umva. Njengoko mna drove ekhaya, mna had to get by Badoo ngu Ewe, kufunyenwe nayo mnandi, ngoko ke akukho mpendulo weza. Wam umbuzo uthi, ingaba ufuna kanjalo ndithi ukuba ndino lonke ixesha bokubhala, enyanisweni, ne girlfriend, kwaye ingabi kunye kubekho inkqubela uqhagamshelane. Kuba ezinzima Umhla kwi-real ubomi Badoo, Mna imagined ngayo ngokwahlukileyo. Waye ukwanalo enjalo amava
← Izizathu a ezinzima budlelwane
Unxibelelwano kunye abantu kwi-intanethi →